DHAGEYSO:Madaxweynaha Hirshabelle oo ka hor-yimid shirka Madaxda D/gobaleedyada ee Nairobi “Sharci Ma Ah Hadii Aan….. – Puntlandtimes
DHAGEYSO:Madaxweynaha Hirshabelle oo ka hor-yimid shirka Madaxda D/gobaleedyada ee Nairobi “Sharci Ma Ah Hadii Aan…..
JOWHAR(P-TIMES)-Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa waxaa uu sheegay in maamulka Hirshabeelle uusan qeyb ka aheyn shirar u dhaxeeyay maalmihii lasoo dhaafay Madaxda maamul goboleedyadda. RIIX HALKAAN SI AAD U DHAGEYSATO CODKA MADAXWEYNE WAARE.
Madaxweyne Waare ayaa sheegay in Hirshabeelle aysan ka qeyb galin shirarkii ugu dambeeyay ee ay yeesheen madaxda maamulada ee looga soo horjeeday dowlada dhexe Soomaaliya,kuwaasoo ka dhacay Magaalada Nairobi ee Caasimadda Kenya.
Waare waxaa uu sheegay in Hirshabeelle iyo dowlad goboleedyadda uu ka dhaxeeyo xiriir Wanaagsan, balse aysan aqbali doonin Golaha Iskaashiga ay shiraan Hirshabeelle oo aan ogeyn,Maadaama maamulada ay wada dhisteen Golaha.
RIIX HALKAAN SI AAD U DHAGEYSATO CODKA MADAXWEYNE WAARE.
Waxaan maqli jiray beerka jecli xaydha jecli, war kani waa naacas aan biyo is marin walahi wax ka doqonsan waligay ma arag. siyaasadna waxba kama yaqaan waana qalbi xoolo waayo wuxuu ka mid ahaa maamul goboleedyada walibana ahaa gudoomiye ku xigeenka isbahaysiga maamul goboleedyada wuuna ku balan furay ugana bxay go aankii aywada qaateen asaga iyo saaxiibadiis asgoon xitaa ogaysiin!!. saaxiibadaas waxay dhaheen waanu ku ixtiraamaynaa saaxiibkayo go aankiisa waxkalena kama sheegin. marka waare inuu xoolo yahay maxaa daba dhigay saaxibadaas uu shalay balantii uga baxay shirarkoodz iyo howlahooda sow kamaba harin oo kuma balan furun asagoo lagu qanciyay xoogay sandareero ah!!. sow maahayn inuu yiraahdo saaxibaday waan ka haray markaa waan ku ixtiraamayaa shirarkooda iyo howlahooda aniguna hada qayb kama ahi?. war caqli xumada ninkaas bal ila arka.